တရုတ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ DC Fan စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ ထမင်းစားချိန်
DC Fan ပျံ့နှံ့နေသည်
Air ကိုစောင်ရေ, DC ပန်ကာ။ BLDC brushless current current motor၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာမှုတို့ကိုခြင်ဆေးတမျိုးထပ်ထည့်နိုင်သည်။ လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးအတွက်ကိုးမြန်နှုန်း။ တက်၊ အောက်သို့ဘေးတိုက်အလိုအလျှောက်လွှဲပါ။ အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ 1-2-4-8H အချိန် switch ကို။5မြန်နှုန်း mode: ပုံမှန်, သဘာဝ, အိပ်, မိခင်နှင့်သန္ဓေသား, ECO mode ကို။ 11dBA .Six မီတာရှည်လျားသောအကွာအဝေးလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးသာဆူညံသံ။
ပါဝါ (အမြင့်ဆုံး) 22W
အရောင် အနက်ရောင်၊ အဖြူ၊ အစိမ်း
အရွယ်အစား 330 * 320 * 516/930 မီလီမီတာ）
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား 365 X 319 X 400 (mm)
လှို 90 °
မြန်နှုန်း Options ကို5mode မှာ9အမြန်နှုန်း
အသိဉာဏ်ရှိသောလှည့်ပတ်ပန်ကာ၏သဘာဝလေသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံရှိပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာထိုးနှက်သည့်အခါခေါင်းကိုက်ခြင်းမခံစားရပါ။ ၎င်းသည်မတူညီသောအခြေအနေများ၏လေထုထောက်ပံ့ရေးလိုအပ်ချက်များအောက်တွင်ပိုမိုတိကျစွာနှင့်လူသားဆန်စွာဖြစ်ခဲ့ပြီးနေ့စဉ်နှင့်ကိုက်ညီသော mode ငါးခုရှိသည်။ အထူးဒီဇိုင်း (၅) မြန်နှုန်း: ပုံမှန်၊ သဘာဝ၊ အိပ်ချိန်၊ မိခင်နှင့်သန္ဓေသား၊ ECO mode သည်အကောင်းဆုံးသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက်နှစ်သက်သော ဦး စားပေးများကိုချိန်ညှိသည်။
၂။ အလွန်အမင်းအကျယ်ပြန့်သောလေကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ရာသီဥတုကိုလေးရာသီတွင်အိမ်တွင်းလည်ပတ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း
၆ မီတာအကွာအဝေးရှည်သောလေကြောင်းလိုင်းသည်လည်ပတ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ လေအေးပေးစက်ကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်အအေးနှင့်အပူ၏ထိရောက်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။
လန်းဆန်းစေသည့်လေကိုပို့ဆောင်ပေးသည့် ၃။ Multi- oscillation
မှတ်သားသင့်သည်မှာ Sapphire ပျံ့နှံ့စေသောပန်ကာအတွက်ခေါင်းလှုပ်စေသောထောင့် ၁၅ မျိုး၊ ၁၀ °၊ ၄၀ ဒီဂရီ၊ ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ ၃၀ °၊ ၆၀ °နှင့် ၉၀ °ဘယ်နှင့်ညာတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအပေါ်၊ အောက်၊ ဘယ်၊ ညာတို့ကိုသုံးနိုင်ပြီးတစ်လမ်းတည်းသို့လည်းလှည့်နိုင်သည်။ လူတစ် ဦး မှုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လူအများအေးသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တင်းရန်၎င်းကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
4. အဆင့်မြင့်တိတ်ဆိတ်သော DC မော်တာ၊ ဆူညံသံအကွာအဝေး ၁၁dBA သာရှိသည်
ရှိပြီးသားပန်ကာထက် ၇၀% ပိုနိမ့်သည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုသည်သင့်အားတစ်ညလုံးအိပ်စက်အနားယူစေသည်။
၅။ နှစ်လွှာအလွှာ ၁၅ ပန်ကာဓါးသွားဒီဇိုင်း
အပြင်ဘက်ဓါးသွား ၉ ခုနှင့်အတွင်းပိုင်းဓါးသွား ၆ ခု၊ နှစ်လွှာအလွှာ ၁၅ ပန်ကာဓါးဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကြီးမားသောပန်ကာပြားမှထုတ်လွှတ်သောလေထုပမာဏသည်စက်ဝိုင်းသေးသေးလေးပန်ကာပြားထက် ၁.၈ ဆမျှပိုများသည်၊ ချိန်ညှိထားသောကွဲပြားခြားနားသောလေတိုက်နှုန်းကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုသော အဆိုပါလေကြောင်းအတူတကွရောနှောလျက်ရှိ၏ အစဉ်အလာပရိတ်သတ်များနှင့်အခြားလေထုလည်ပတ်ခြင်းပရိတ်သတ်များနှင့်မတူဘဲခြင်တွန်းလှန်အသိဉာဏ်ရှိသောလှည့်ပတ်ပန်ကာသည်လေရှည်သောအကွာအဝေး၊ ကျယ်ပြန့်သော Windward areaရိယာနှင့်ပျော့ပျောင်းသောလေစီးဆင်းမှုရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရေတိမ်ပိုင်းကမ်းခြေကဲ့သို့၎င်းသည်လေအားဖြင့်လေဖြတ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောကိုယ်ခန္ဓာရှိသူများအတွက်သင့်တော်သည်။
စားပွဲအသုံးပြုရန် 6. ဖြုတ်နိုင်သော။
ဒါဟာစားပွဲနှင့်ကြမ်းပြင်နှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပုံစံနှစ်မျိုးလုံး၏အမြင့်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးလူတို့၏နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သောအကောင်းဆုံးအမြင့်နှင့်ချိန်ညှိထားသည်။ ကြမ်းပြင်ပရိတ်သတ်များအတွက် 93cm နှင့်စားပွဲပေါ်မှာပရိသတ်များအတွက် 51.6cm ။ စာအုပ်ပေါ်တွင်ဖတ်ခြင်း၊ ကလေးနှင့်အတူကော်ဇောထဲ၌ကစားခြင်းဖြစ်စေ၊ အိပ်ရာ၌အိပ်ခြင်းဖြစ်စေဖြစ်စေသင့်အတွက် ပို၍ ကောင်းသောထောင့်ရှိသည်။
ခြင်တွန်းလှန်ပေးသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီသည်ပြင်းထန်ပြီးကျယ်ပြန့်သောပျံ့နှံ့သောလေစီးကြောင်းနှင့်ပေါင်းစပ်။ ခြင်ဆေးများကိုတိုးပွားစေသည်။ ကျယ်ပြန့်သောထောင့်ဖြင့်ရွေ့လျားနေသော ဦး ခေါင်းကိုလေကြောင်းဖြင့်အိမ်တိုင်းထောင့်တိုင်းသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးခြင်ကိုက်ခြင်းမရှိဘဲအေးမြသောနွေရာသီကိုခံစားနိုင်သည်။
၈။ Smart HD touch screen အသစ်
၎င်းအခြေနေသည်ရိုးရှင်းသောခလုတ်များနှင့်မတူသည့် PC HD အလိုအလျောက်ပိတ်မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ခေတ်မီသည်။ အလင်းသည်ပျော့ပျောင်း။ အလင်းရောင်မရှိ။ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းဖန်သားပြင်သည်အလုပ်မလုပ်ဘဲအလိုအလျောက်ပိတ်သွားလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ Tower Air Multiplier Bladeless ပန်ကာ
dc pedestal ဝါသနာရှင်ရပ်ပါ
Tower Air Multiplier Bladeless ပန်ကာ